इन्टरनेटमा भाइरल तस्बिरः हेर्नुहोस् सानासाना बालबालिकाको हातमाथि बाइक ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
इन्टरनेटमा भाइरल तस्बिरः हेर्नुहोस् सानासाना बालबालिकाको हातमाथि बाइक ?
काठमाडौंः इन्टरनेटको दुनियाले संसारलाई निजकै जोडिदिएको छ । इन्टरनेटमा सार्वजनिक भएका सबै तस्बिर सत्य नहुन सक्छन् । तर केही तस्बिरले भने तपाईंलाई पनि चकित पार्न सक्छ । कसैले इन्टरनेटमा एउटा तस्बिर पोष्ट मात्र गरेमा त्यसलाई सयौँ करोडौले शेयर गर्छन् । त्यसरी नै भाइरल भएका केही तस्बिर छन् ।
यहाँ राखिएको मध्ये पहिलो तस्बिर सन् २००९ जुलाई २७ मा खिचिएको हो । यो भारतको तस्बिर हो । भारतको तमिलनाडु स्टेटमा रहेको सरकारी स्कूलको भनेर सार्वजनिक गरिएको तस्बिरमा एउटा हृदयविदारतक दृश्य देख्न सकिन्छ।
यद्यपी यो तस्बिर बच्चाहरुको हक र अधिकारका लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा खिचिएको थियो । यो तस्बिर देख्ने अधिकांश मानिसले गाली गर्छन् । हुन पनि सानासाना स्कुले बालकको हातमाथि बाइक चलाइएको छ र त्यहाँ उपस्थित मानिसहरुले तमाशा हेरिरहेको देख्न सकिन्छ ।
उक्त विद्यालयले भने यसो गर्नका लागि बालकहरुको अभिभावकसँग अनुमती लिएको बताएको छ । यसको थप यथार्थ भने सार्वजनिक भएको छैन् ।